Motorola agaghị ahapụ mmepe nke Moto Mods | Androidsis
Motorola Moto Mods bụ echiche dị omimi na-achọ iweta modular nye ụlọ ọrụ ekwentị. Ọ bụ ọrụ na-adọrọ mmasị nke na-achọ inye ndị ọrụ ọtụtụ nhọrọ. Ọ bụ ezie na, a na-ajụkarị ewu ewu ya na ihe ịga nke ọma ya karịa otu oge. N'ihi nke a, ọtụtụ mgbasa ozi kwadoro na ụlọ ọrụ ahụ na-atụle ịhapụ mmepe ya.
Asịrị ndị a na-enweta ntakịrị ntakịrị izu gara aga. Ya mere, iji mee ka obi dị jụụ, Motorola n'onwe ya nwere pụọ ma chebe Moto Mods. A gaghị ahapụ mmepe ya.
Mgbe ọtụtụ okwu kwusịrị nke ọ na-aga n'ihu na njedebe ya, Motorola n'onwe ya chọrọ ikwu okwu karịa n'okwu a. Companylọ ọrụ ahụ agọnahụla na ha ga-ahapụ mmepe nke ngwaahịa ndị a. Nke a bụ ozi ụgha.
Ihe ha kwuru gbasara Moto Mods bụ na ha chọrọ ka ha bụrụ akụkụ bụ isi nke atụmatụ ahụ nke ụlọ ọrụ. Ha dị mkpa, ọ bụ ezie na etinyebeghị ha n'ụzọ zuru ezu na atụmatụ ahụ. Ihe ụlọ ọrụ chọrọ ime, yabụ anyị nwere ike ịhụ mgbanwe na nke a n'oge na-adịghị anya.
Agbanyeghị, Motorola hapụkwara anyị ụfọdụ nkwupụta dị ịtụnanya. N'ihi na ha kwuru na Ejirila Moto Mods dị mkpa. Ihe na-ada ụda, nke ahụ anaghịkwa agba ume. Ebe ọ bụ na ọ hapụghị n’ebe dị mma ndị Mods ọhụrụ ahụ na - emepe emepe ugbu a.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ma ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa ọhụụ na mpaghara a. Moto Mods bụ otu n'ime ọrụ na-atọ ụtọ nke anyị hụtụrụla na gam akporo n'afọ adịbeghị anya. E wezụga ịbụ nzọ dị egwu nke Motorola. Ọ dabere na ha na ha ga-aga n'ihu n'ahịa. Anyị ga-ege ntị na ihe na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Motorola agaghị ahapụ Moto Mods
Ihe ntinye 9 Galaxy Note ga - abịa na $ 150 iji nọrọ na Fortnite